iPhone Xs, iPhone Xs Max na iPhone Xr, ihe niile gbasara ihe ọhụrụ na Apple | Akụkọ akụrụngwa
iPhone Xs, iPhone Xs Max na iPhone Xr, ihe niile gbasara ngwaọrụ Apple ọhụrụ
Apple emeela ememme kachasị ewu ewu nke afọ, nke ọ na-akpọsa ọkwa ọhụrụ ya ma na-eduzi anyị ntakịrị banyere ihe a ga-ahụ n'ahịa n'oge afọ fọdụrụnụ na ọtụtụ nke na-esote. Ndị a bụ atụmatụ, ọnụahịa na nnweta nke Apple iPhone Xs ọhụrụ, iPhone Xs Max na iPhone Xr ọhụrụ. Anyị ga-egosi gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọdụ ndị a, gụnyere ụdị ọhụrụ nke iPhone dị ọnụ ala nke Apple wepụtara yana nke nwere ezigbo ohere ịbụ ọganiihu ahịa.
1 iPhone XS na iPhone Xs Max: Ihe niile ịchọrọ ịma
1.1 Ọganihu igwefoto dị oke mkpa na ọ nweghị ihe ọhụụ na ihuenyo ahụ
1.2 Imirikiti ụda stereo na ikike Dual SIM
1.3 Ọnụahịa na nnweta
2 iPhone Xr: Ihe niile ịchọrọ ịma
2.1 Ihuenyo na igwefoto, nnukwu ọdịiche
2.2 Ahịa na nnweta nke iPhone Xr
iPhone XS na iPhone Xs Max: Ihe niile ịchọrọ ịma
Ugbu a iPhone dị ike karịa mgbe ọ bụla, Ihe nhazi ahụ bụ obi nke ngwaọrụ ahụ, yabụ iPhone Xs na mbipụta abụọ a gbanwere A12 Bionic 7 nanometer (isi asatọ). Kpọmkwem otu ihe atụ ahụ ga-agụnye nwanne ya nwoke nke okenye iPhone Xs Plus. Na mgbakwunye, ekele maka ihe ọhụrụ 7 nanometer processor a (nke mbụ ụdị ya), ụlọ ọrụ Cupertino na-ekwe nkwa nnwere onwe nke doro anya karịa nke ndị bu ya ụzọ. iPhone Xs na-enye opekata mpe (na tiori) ọkara elekere karịa iji na ihuenyo karịa iPhone X ugbu a, na iPhone Xs Max ga-enyekwa 1h 30m ogologo oge karịa iPhone X.
Ihe nhazi: A12 Bionic 64-bit na Neural Ngini
Nchekwa Ram: 3 GB (nke kpebiri)
Nchekwa: 64 GB / 256 GB / 512 GB
Njikọ: LTE, WiFi 802.11 ac MIMO, Bluetooth 5.0, NFC
Batrị: Charginggba ụgwọ ngwa ngwa na Qi wireless na-akwụ ụgwọ
Nchebe: Nje ID
Ọganihu igwefoto dị oke mkpa na ọ nweghị ihe ọhụụ na ihuenyo ahụ
Ugbu a, anyị nwere ihe ntanetị 12 MP abụọ na-enye mgbatị anya na oghere f / 1.4 maka nke elu na f / 1.8 maka nke ala. Otu ihe ahụ na-eme n'ihu ese foto, mma ubé, ọ bụ ezie na ọ ka na-anọgide dị ka naanị 7 MP na oghere f / 2.2.
Agbanyeghị, ha ahọrọla ndozi site na ngwanrọ dịka Smart HDR, a Eserese mode na ihe omimi ike na ọbụna a n'ụzọ zuru ezu aka agbanwe azụ aperture usoro. Nke a na ọkwa foto, n'agbanyeghị na ọkwa ndekọ anyị na-ahụ na iPhone anyị na-ahụ mgbakwunye nke igwe okwu anọ ga-enyere anyị aka ịdekọ ọdịyo na stereo nke enwere ike mepụtaghachi, atụmatụ nke ga-enye ogo ntị dị ukwuu na ndekọ anyị ji iPhone Xs ma ọ bụ Xs Max anyị mee, site n'ụzọ, ngwaọrụ abụọ ahụ nwere otu igwefoto.
IPhone Xs ihuenyo: 5,8 Inch Super Retina OLED - Mkpebi 2.436 x 1.125 pikselụ, 458 PPI
IPhone Xs Max ihuenyo: 6,5 ″ Super Retina OLED - 2.688 x 1.242 pixel resolution, 458 PPI
Igwefoto mbụ: 12 na 12 MP ihe mmetụta abuo nwere obosara sara mbara na oghere telephoto, oghere f / 1.8 na f / 2.4 n'otu n'otu, yana ngwa anya elekere abụọ. 4K na-edekọ na 24/30/60 FPS, 4 LEDs True Tone flash.
Igwe n'ihu: 7 MP Ezi Omimi, f / 2.2, na Retina Flash, na Full HD ndekọ.
Maka akụkụ ya, ihuenyo nke na-aga n'ihu na-enye a Samsung OLED panel na teknụzụ ezi ụda na gburugburu ebe obibi. Anyị nwere mkpebi nke pikselụ 2.436 x 1.125 nke na-enye ngụkọta 458 PPI maka ụdị 5,8 ″ na mkpebi nke 2.688 x 1.242 pikselụ nke na-enye otu 458 PPI na ụdị buru ibu karịa 6,5 ″. Ihe a niile dị na ọkwa ihuenyo, dakọtara na nsụgharị nke HDR niile dịka HDR10 na Dolby Vision.
Imirikiti ụda stereo na ikike Dual SIM
Companylọ ọrụ Cupertino etinyela ugbu a ndị isi okwu abụọ dị ike ma dịkwa mma karị maka ụda stereo ka ha wee nwee ike ime ụdị ihe nkiri ahụ, na eziokwu bụ na e nwere ole na ole ọrụ ndị mkpesa banyere "ala" àgwà nke stereo audio ugbu ke gara aga iPhone X. Ugbu a nsogbu ndị a na-edozi.
N'aka nke ọzọ, ewepụtara sistemụ SIM abụọ nke ahụ ga - enyere anyị aka itinye otu kaadị SIM na ụdị anụ ahụ ebe anyị nwere ike iji nke ọzọ na usoro eSIM. Agbanyeghị, ụdị ga-adaba na kaadị microSIM abụọ ga-ere naanị na China. O di nwute, eSIM teknụzụ agbasaghị ebe niile. Otú ọ dị, Apple na-azọrọ na o nwebatala usoro njikwa SIM abụọ nke ga-ahụ ụzọ batrị ga-ekwe omume n'ihi ọnọdụ nke oriri data na mkpuchi.
Ọnụ You nwere ike ịmalite ntinye akwụkwọ site na September 14 na-esote, ọ ga-adị na ọnụ ọgụgụ dị mma nke ahịa gụnyere Spain site na September 21 maka mkpokọta.
iPhone Xs 64 GB site na euro 1159
iPhone Xs 256 GB site na 1329 euro
iPhone Xs 512 GB site na 1559 euro
iPhone Xs Max 64 GB site na 1259 euro
iPhone Xs Max 256 GB site na 1429 euro
iPhone Xs Max 512 GB site na 1659 euro
iPhone Xr: Ihe niile ịchọrọ ịma
Nke a bụ iPhone “ọhụrụ” ọhụrụ nke Apple bidoro. Ọ na-eso ụmụnne ya ndị okenye kerịta A12 Bionic processor, nke kachasị ike n'ahịa ma rụpụta ya na 7 nanometers. N'ihi ya popularizes niile na ihuenyo oyiyi, Face ID technology na maa ahapụ Home button na mkpisiaka agụ. O sina dị, Apple ebiela n'akụkụ dị ka igwefoto na ihuenyo iji dozie ọnụahịa dị ka o kwere mee.
Ihe nhazi: A12 Bionic
Nchekwa RAM: 3 GB (kwadoro)
Nchekwa: 64 GB / 128 GB / 256 GB
Njikọ: WiFi, Bluetooth 5.0, LTE na NFC, SIM abụọ
Akụkụ: 150 x 75,7 x 8,3 mm
Ibu ibu: 194 grams
Akụrụngwa: Aluminom na iko
Maka akụkụ ya a na-ejikwa Aluminium 7000 mechie ọnụ ya mgbe azụ bụ iko ọzọ, na ọdịdị ọ fọrọ nke nta ka yiri ka iPhone 8 si azụ.
Ihuenyo na igwefoto, nnukwu ọdịiche
Ugbu a, ha na-ahọrọ a 6,1 inch LCD panel Mmiri Liina, na-ahapụkwa teknụzụ 3D Touch mana ọ na - emeziwanye ume ume nke ihe mmetụta capacitive na 120 Hz.
Ihuenyo: 6,1 sentimita asatọ na 1.792 x 828 pixel mkpebi na 326 Mba njupụta
Igwefoto mbụ: 12 MP nwere oghere f / 1.8 na Ezi ụda nwere ọkụ anọ
Igwefoto onwe: 7 MP aperture f / 2.2 nwere Ezi Omimi usoro
Igwefoto bụ ebe ọzọ ebe Apple jisiri ike tinye mkpa, anyị na-ahụ otu ihe mmetụta nke 12 MP nwere oghere f / 1.8 na Ezi ụda ọkụ nwere ọkụ anọ. N'aka nke ọzọ, n'ihu nwere 7 MP aperture f / 2.2 na na-enye nkwado maka ikike eserese eserese site na ihe mmetụta Ezi Omimi. Nke ahụ bụ, na ese foto abụọ anyị nwere Ọnọdụ Eserese na atụmatụ niile nke iPhone kachasị ọhụrụ.
Ahịa na nnweta nke iPhone Xr
The iPhone Xr ga-adị site na October 26, na-ekwe ka ndoputa nke otu ihe ahụ site na October 19 na ọnụahịa ndị a:
iPhone Xr site 64 GB site 859 euro
iPhone Xr site 128 GB site 919 euro
iPhone Xr site 256 GB site 1.029 euro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » iPhone Xs, iPhone Xs Max na iPhone Xr, ihe niile gbasara ngwaọrụ Apple ọhụrụ
XinleHong 4 4x9125 redio na-achịkwa nyocha ụgbọ ala
Apple Watch Series 4 bụ ndị gọọmentị: Mara akụkọ ha niile